Beriziky Jean-Omer : “Omeo alalana haneho ny heviny ny olona” | NewsMada
Beriziky Jean-Omer : “Omeo alalana haneho ny heviny ny olona”
Par Taratra sur 21/08/2017
Hanao ahoana ny fahalalahana mivory sy maneho hevitra eto Madagasikara amin’ny afitsoky ny mpitondra? Mila omena fahalalahana maneho ny heviny ny olona, raha ny nambaran’ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer.
“Raha misy lalàna iray lehibe momba ny demokrasia na ny fanehoan-kevitra, ohatra, ka sakanana hatrany ny olona tsy haneho ny heviny: tsy hirotsaka an-dalambe izy haneho ny heviny? Izay ny farany azony atao.”
Io ny fanehoan-kevitry ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer, ny faran’ny herinandro teo, momba ny fahalalahana manao fivoriana sy maneho hevitra izay niteraka resabe tato ho ato.
Mety tsy ho fantatra intsony ny fetran’ny firotsahana an-dalambe. “Maninona àry raha omen-dalana haneho ny heviny ny olona? Omeo alalana haneho ny heviny ny olona”, hoy izy. Misy fetrany io, ary azo atao tsara ny mametraka izany. Fa tsy hery hatrany no aseho rehefa misy ny toy izay.
Mahatonga valifaty ny fanehoan-kery be loatra
“Miteraka valifaty indraindray ny fanehoan-kery be loatra. Lasa faritra saropady avokoa ny faritra rehetra ny eto Antananarivo no hiafarany”, hoy izy. Tsy mety izay. Manao bemarenina ny fanjakana, na misy aza ny olona maneho hevitra sy soso-kevitra. Tsy misy koa ny fierana amin’ny vahoaka amin’ny zavatra atao.
Tsy misy fitoniana ny raharaha politika eto amintsika amin’izao fotoana izao. Mbola manahirana ny misaintsaina azy: tsy fantatra marina ny lalan-kombana. Moa hivoaka ny tonelina isika sa mbola hiroso hatrany any amin’ny fahasahiranana?
Mila mihaino sy mifampiera amin’ny vahoaka ny mpitondra
Tokony hihaino ny sokajin’olona rehetra izay milaza aminy izay zavatra hitany fa tsy mety eto amin’ny firenena ny fitondram-panjakana, raha ny vahaolana narosony. Na amin’ny sehatra misy ny tsirairay izany, na amin’ny fiainam-bahoaka ankapobeny.
Mila fifampierana fa tsy kobokobonin’ny tena avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra raisina eto amin’ny firenena. Eo, ohatra, ny fanomezan-dalana ny vahiny hitrandraka amin’ny toerana iray, nefa ny olona eny ifotony tsy mahalala izany: ny fitrandrahana atao, ny fiavian’ny mpitrandraka, ny tombontsoa mety ho azon’ny tompon-tany…
“Tokony hahatsapa ny mpitondra fanjakana fa nampindramin’ny vahoaka fahefana, fa tsy hoe tsy manam-petra izany”, hoy izy.